६ गिलास : मान्छेको इतिहास- दसैं विशेष - कान्तिपुर समाचार
हजारौं वर्षअघि बियर बन्यो, अहिले कोकाकोलाको साम्राज्य छ । बियर अर्थात् जाँड पहिलो रक्सी थियो । यो बनाइएको थिएन, वास्तवमा आविष्कार भएको थियो । बियरदेखि कोकसम्मको इतिहास पढ्नु आफ्नै इतिहास बुझ्नु हो ।
कार्तिक १, २०७७ रमेश भुसाल
लमजुङको बाहुनडाँडामा चहकिलो जून लागिरहेछ । दिनभरि घामले सेकिएका हिमाल–पहाड जूनको शीतल तापेर सायद सुत्ने तयारीमा छन् । मर्स्याङ्दी यहाँसम्म बग्दो नै छ । केही तल टनेलमार्फत टर्वाइनले झ्याँको झारपेछि सहर–गाउँ झिलिमिली हुन्छन् ।
त्यो जूनमा मिसिएको छ गाँजाको धूवाँ, कोदोको रक्सी र लेकको भेडा । माथि भीरपुस्तुन गाउँमा पहिलोपटक पुग्न पहाड कोतर्दै गरेको भ्याकु अर्थात् डोजरले लाइट बालेरै भए पनि टिक–टिक–टिक गर्दै ढुंगा फोर्दै छ । पहिला ढिकी–जाता कराउँथे अनि आए मिल, आजकल भ्याकुले सबैलाई उछिनेका छन् । भ्याकु यसरी उकालिँदै छ, मानौँ ऊ जून छुन जाँदै छ । चुचुरोमै पुगे पनि छेउको मनास्लु पुग्ने हो वा अन्नपूर्ण, त्योभन्दा माथि उसको क्षमता छैन ।
जुनेली रातमा मादलको मधुर स्वर नजिकै गुन्जिरहेछ । साथी भीम घलेले भन्यो, ‘रमाइलो गर्न जाम दोस्त ।’ पानैको चौकाले भइयो भेट बेलै र मौकाले भन्ने गीतजस्तो भो । पल्तिर पिलरवाला नयाँ घरको घरपैँचो रे ∕ पिलरवाला घरको धेरै पुरानो इतिहास छैन, यो नयाँ प्रजाति हो । खर वा ढुंगाले छाएको पिँढीवाला घर हराउँदै छ, घुमाउने घर त इतिहास नै हुन लागिसके ।
मर्स्याङ्दी नदीको कथा खोज्न हिँडेका म र नवीन बराल । म कलमले कथा लेख्छु वा कम्प्युटरमा, नवीनचाहिँ क्यामराको लेन्सले । आजकल कलम र लेन्स मिसाएर कम्प्युटरमा हेर्न मिल्ने कथा बनाएपछि मल्टिमेडिया बन्छ । पढ्न, हेर्न, सुन्न सबै पाइने । समाचारमा जमाना यसैको छ । यो समाचारको पिलरवाला घर हो, भर्खरभर्खर आएको, पत्रिका खर र ढुंगाले छाएको घरभन्दा हुन्छ । केही समयपछि पत्रिका घुमाउने घर बन्नेवाला छन् भन्दै छन् ।
७० हजार वर्षअघिदेखि पृथ्वीमा फिँजारिन सुरु भएको मान्छे अर्थात् होमो सेपियन्सको विस्तारित रूप हामी हौँ, अर्को ७० हजार वर्षपछि यो ठाउँ कस्तो होला ? वरिपरिका सेता हिमाल रहिरहलान् ? जून यस्तै होला ? जाबो ७० वर्ष बाँच्ने मानिसले एकबारको जुनीमा अर्बौँ वर्ष पुरानो पृथ्वीलाई कति नै भोग्न पाउँछ र ! गत ५०० वर्षमा विज्ञानको चमत्कारले भ्याकु उकालो लागिरहेछ । हामी बिहान गुडेर साँझ बाहुनडाँडा पुग्ने भएका छौँ । जहाजमा उडेको भए यति नै समयमा बेलायत पुगिन्थ्यो । तर, मानिसको यो चामत्कारिक यात्रा कता जाला ? के थाहा यो चमत्कारले मानव इतिहासको अन्त्य गरेर कुनै बिलकुल फरक कुराको सुरुआत पो गर्छ कि ! हामी पिलरवाला घरमा छिर्छौं । गीत चलिरहेछ :
मेरो हजुर विदेशमा हराउँदा
झल्को आउँछ मिनिबस कराउँदा ।
तारासँगै जून, बिर्स्यो कि मायाले मैले लाको गुन
गिलासमा कोदोको रक्सी आइपुग्छ । घलेको स्वागत रक्सीले, बाहुनको चाहिँ दूधले ! किन बाहुनले रक्सी पारेनन् वा पिउन सकेनन् वा लुकीलुकी पिए ? किन रक्सीले एउटै ठाउँमा बसेका मानिसलाई विभाजन गरिदियो ? कसैले पिउन हुने कसैले नहुने ! पिउने र नपिउनेको जातै फरक !
लेखक टोम स्टान्डेजले मानिसको इतिहास ६ वटा गिलासमा हुन्छ भनेका छन् । आफ्नो किताब ‘अ हिस्ट्री अफ वर्ल्ड इन सिक्स ग्लासेज’ मा उनले बियर, वाइन, ह्विस्की (रम, ब्रान्डीसहित), चिया, कफी र कोकाकोलाबारे लेखेका छन्, जुन अहिले बाहुनडाँडास्थित मेरो झोलामा छ । यसपटक हिमाल र नदीसँगै गिलास पनि पछ्याउँदै छु । हजारौं वर्षअघि बियर बन्यो, अहिले कोकाकोलाको साम्राज्य छ । बियर अर्थात् जाँड पहिलो रक्सी थियो । यो बनाइएको थिएन, वास्तवमा आविष्कार भएको थियो । बियरदेखि कोकसम्मको इतिहास पढ्नु आफ्नै इतिहास बुझ्नु हो ।
मानिसले झन्डै १२ हजार वर्षअघि अन्न उब्जाउन सुरु गर्‍यो । वर्षैभरि पुर्‍याउन भण्डारण गर्नुपर्ने भयो । खाल्डोमा पानी नछिर्ने गरी अन्न भण्डारण गरे पनि कतै रसायो वा चुहियो । जब अन्नमा पानी पस्यो तब पहिलो रक्सी अर्थात् बियरको आविष्कार भयो । टोम स्टान्डेज लेख्छन्, ‘चुहिएको पानी जसै अन्नमा पर्‍यो त्यो उम्रियो । उम्रिएको अन्न गुलियो भयो ।’ त्योबेला मानिसलाई के थाहा– कसरी गुलियो भयो ! तर, अहिले विज्ञानले पत्ता लगायो, वास्तवमा भिजेको अन्नले डाइस्टास नामक इन्जाइम उत्पादन गर्दोरहेछ । यो इन्जाइमले अन्नभित्र रहेको स्टार्चलाई माल्टोस सुगर अर्थात् माल्टमा परिणत गरिदिँदोरहेछ । सबैखाले अन्नले डाइस्टाज इन्जाइम उत्पादन गर्छन् । तर, जौ सबैभन्दा अव्बल छ ।
त्योभन्दा पनि आश्चर्यजनकचाहिँ झोलिलो अन्नलाई केही दिन त्यसै छाडिदिँदा त्यसमा परिवर्तन आयो । त्यो फिँज निस्केको झोल पिउँदा मस्तमगन पो भए हाम्रा पुर्खा । वास्वतमा त्यसरी छाडिदिँदा हावामा भएको ढुसीले झोलमा रहेको चिनीलाई रक्सीमा परिणत गरिदिन्छ । यही झोल अर्थात् बियर पिएर मेसोपोटामिया वा अहिलेको इराकको सेरोफेरोमा मानिस मस्तमगन हुन सुरु गर्‍यो । जाँडको युग वा मातको युगको सुरुआत गर्ने भूभागमा अहिले रक्सी प्रतिबन्धित छ । त्यसको लामो इतिहास छ । रक्सीमा धर्म मिसियो वा धर्ममा रक्सी ! कुनै भगवान्लाई रक्सी नभई नहुने भो अनि कसैलाई छोए पनि पाप लाग्ने ! गीत चलेकै छ । दोहोरोबाट एकोहोरो भाकामा सर्‍यो :
हितको माया नौडाँडापारि
रित्तो भयो पुस्तुनको चौतारी
चाँदी रयाले, घरमा दिल छैन तिम्रो मायाले
कृषियुगको सुरुमा जाँड जंगली मानिसलाई सभ्य बनाउन प्रयोग गरिन्थ्यो । मेसोपोटामियामा जाँड पिउनु मान्छे बन्नु हुन्थ्यो । विश्वकै पहिलो साहित्यिक कृति मानिने ‘इपिक अफ गिलगामेस’ मा बियरका बारेमा उल्लेख छ । जंगली मानिस इन्कुडुलाई सभ्य मानिस बनाउन कृषियुगमा प्रवेश गरिसकेकी युवतीले गोठालाहरूको गाउँमा लान्छिन् । गाउँलेहरूले उसका अगाडि खाना राखे, बियर राखे तर इन्कुडुले रोटी खान वा बियर पिउन जानेको थिएन । युवतीले इन्कुडुलाई भनिन् :
खाना खाऊ इन्कुडु वास्तवमा मानिसहरू यसरी बस्छन्
बियर पिऊ इन्कुडु वास्तवमा यो जमिनको चलन हो ।
इन्कुडुले भुँडीभरि खायो, सात जग बियर पियो, फुल्यो अनि गायो खुसीको गीत । पानी शरीरमा खन्यायो, तेलले मालिस गर्‍यो र आफूलाई मानिस बनायो ।
तपाईं मानिस भइसक्नुभएको छ, कृपया इन्कुडुजस्तो फेरि मानिस बन्ने धेरै प्रयास नगर्नुहोला । एकपछि अर्को गिलास आइरहेछ । कोही त्यहीँ पल्टेर निदाइरहेछन्, कोही थप रक्सीको ऊर्जाले गीत फुराइरहेछन् र नाचिरहेछन् । परापूर्वकालदेखि नै जाँड नियमले पिइन्थ्यो । जति पायो उति दन्काउने होइन । कामदारलाई हिसाब गरेर राशनमा बियर दिइन्थ्यो । मेसोपोटामियाको राशनमा रोटी, बियर, खजुर, प्याज र कहिलेकाहीं मासु र माछा अनि केही तरकारी दिइन्थ्यो । खजुरमा भिटामिन ए, बियरमा भिटामिन बी, प्याजमा भिटामिन सी हुनेरहेछ । अहिले आधुनिक समाजमा एक जनाका लागि ३५०० सयदेखि ४००० क्यालोरी खानु भन्ने कुरालाई दाँजेर हेर्दा मेसोपोटामियाको राशन एकदम सन्तुलित भोजन थियो भन्ने बुझ्न सकिन्छ भन्छन् स्टान्डेज । हाम्रा पुर्खा बाठा थिए क्यार ! जँड्याहा नै भन्ठान्नु भो कि क्या हो ! बाहुनको छोरो देखाएर पिउन्न, लुकाएर पिएको भन्नै भएन, कसो !
साढे चार अर्ब वर्षअघि बनेको भनिएको पृथ्वीमा झन्डै पन्ध्र करोड वर्गकिलोमिटर त जमिन नै छ । पूरै नेपाल टेके पनि बल्ल करिब डेढ लाख वर्गकिलोमिटर पूरा हुन्छ । एक बारको जुनीमा कति नै भूभाग टेक्न सकिएला र ! कसले कति गिलास झ्वाम पारे भन्ने हिसाब म किन गरिराखूँ ! जसले पिलाएको छ, उसैले हिसाब जानोस् । तर, जति पायो उति पिउनु आदिमकालमा पनि राम्रो मानिँदैनथ्यो । बियरपछि मेसोपोटामिया र ग्रीसमा वाइनको दबदबा थियो । पछि रोमनहरूले वाइनको ठूलो व्यापार गरे । ग्रीक कवि युवोलुसको नाटकको कुनै एक भागमा भनिएको छ– असल मानिसका लागि म जम्मा तीन जग वाइन बनाउँछु । पहिलो जग स्वास्थ्यका लागि, दोस्रो प्रेम–आनन्दका लागि र तेस्रो निद्राका लागि । त्यसपछि असल मानिसहरू घर जान्छन् । चौथो मेरा लागि होइन, यो नराम्रो व्यवहारका लागि हो । पाँचौं चिच्याउनका लागि, छैटौं अपमान र रूखोपनाका लागि, सातौं झगडाका लागि, आठौं तोडफोडका लागि, नवौं डिप्रेसनका लागि र दसौं जगचाहिँ पागलपना र अचेतनाका लागि हो । तपाईं कति जगवाला पर्नुभो, आफैँ हिसाब गर्नुस् !
मध्यरातमा छर्लंगै आकाशमा टल्किएको जूनलाई कतिबेला बादलले छोप्यो कुन्नि ! बिहान उठ्दा त झमझम पानी पो परिरहेको छ । डाँडाकाँडामा सेताम्मे हिउँ । यस्तो मौसमलाई जाँडका पारखीले ‘मौसमले च्यालेन्ज गर्‍यो’ भन्ने गरेका छन् । तपाईं त्यसो भन्नुस् भनेर म कसरी भनूँ ?
घरको पिँढीमा मर्स्याङ्दी मर्किंदै बगेको पहाड अनि कुहिरोले छोपिएका हिमालतिर आँखा लगाएर हातमा उही किताब लिएर बसेको मात्र के थिएँ, बाहुनडाँडैमा घर भएका नवीनकी सानीमा दूध चिया लिएर आइपुगिन् । यो चियाले कुनै बेला साम्राज्य खडा गराएको थियो । रक्सीभन्दा यो कुनै पनि तरिकाले कमजोर थिएन । चिनियाँ भनाइ नै छ– चियाबिना एक दिन बस्नुभन्दा बरु खानाबिना तीन दिन बस्नु ठिक । पृथ्वी हल्लाउने चियाको चुस्की मारेर पाना पल्टाउँछु । १७ औं शताब्दीमा आफ्नो राज्यमा घाम अस्ताउँदैन भन्ने बेलायत चिया व्यापारको केन्द्र बन्यो अनि विश्वको पहिलो महाशक्ति । वाष्प इन्जिनले ल्याएको क्रान्तिलाई उसले भरपूर प्रयोग गर्‍यो र बढेबढे फ्याक्ट्री खोल्यो । यसलाई जोडेको थियो– चियाले । चिया विश्वबजारमा पुगेको थिएन । युरोपेलीका लागि त यो नयाँ पेयपदार्थ थियो । इस्ट इन्डिया कम्पनीको ठूलो आयस्रोत चियाको व्यापारबाट भयो । त्यसपछि चिया यो पृथ्वीकै इतिहासमा पानीपछाडि सबैभन्दा बढी पिइने पेयपदार्थ बन्यो ।
चियामा चीन बेलायतभन्दा अगाडि थियो तर उसले विश्वव्यापी गराउनै सकेन । इसापूर्व २७०० तिर चीनमा पहिलो चिया सेन नुंगका पालामा बनाइएको बताइन्छ । पूर्वी हिमालयको भारत–चीन सीमानजिकै क्यामेलिया साइनेन्सिस नामक सधैँ हरियो हुने बिरुवा नै चिया हो । बेलायत वास्तवमा आधुनिक विश्वको चायवाला हो । नरेन्द्र मोदीचाहिँ नयाँ चायवाला । चिया स्वास्थ्यकर पेयपदार्थ नै मानिन्थ्यो, पछि विज्ञानले पत्ता लगायो– चियामा फेनोलिक्स अर्थात् टानिक एसिड हुन्छ, जसले टाइफाइड, झाडापखाला गराउने ब्याक्टेरियालाई समेत मार्न सक्छ ।
बिहान हामी उकालो लागेर भीरपुस्तुन पुग्छौं । बाटोमा भ्याकु अझै ढुंगा फोरिरहेकै छ । हायलकायल परेका भ्याकु चालकले भने, ‘एकदम कडा ढुंगा परेछ दिमाग खराब भो ।’ लाखौं वर्ष लागेर बनेको पहाड फोर्न कहाँ सजिलो हुन्छ र ! भीरपुस्तुनमा हामी घले आमाको घर पस्छौं । ‘जाँड छैन केरे बाबु, कफी खान्छौ ?’ घले आमाले सोधिन् । ज्या कफी पो ! भ्याकु पुगेको छैन तर कफी पुगिसकेछ । उही नेसकफीको गिलास आइपुग्यो । यो त ज्याद्रो कफी हो, जुन सन् १९५३ मा इडमन्ड हिलारी र तेन्जिङ नोर्गेसँग सगरमाथा पुग्यो अनि सन् १९६९ मा यो निल आर्मस्ट्रंगसँग चन्द्रमा पनि । इतिहास हेर्ने हो भने कफीले बडेबडे अध्येता, विचारक अनि वैज्ञानिकलाई जन्माएको थियो । यसलाई विचारकको पेय पनि भनिन्छ । तपाईं धेरै विचारक बन्ने प्रयास नगर्नुस् नि फेरि ! क्याफिन धेरै भयो भने रातभरि निद्रा लाग्दैन ।
१६ औं शताब्दीअघिसम्म मानिस ‘पृथ्वी गोलो छ’ भन्नेसम्म पनि विश्वस्त थिएन । अहिले पो गुगल अर्थ आयो । रकेट चन्द्रमामा पुगे । त्यो कति नै अघिको कुरो हो र 1 पश्चिमाहरूले पुराना कथाभन्दा माथि उठेर नयाँ कुरा सोच्न थाले । एकपछि अर्को आविष्कार गरे । संसार चहार्न हिँडे । हरेक पुराना कुरालाई चुनौती दिने चलन सुरु गरे अनि प्रमाण खोज्न लागे । युरोपमा यो चुनौती दिने युगको सुरुआत गर्न कफीको ठूलो भूमिका थियो भनिन्छ । कफीले दिमागलाई तिखो बनाउँछ र विचारमा स्पष्टता ल्याउँछ भन्ने मान्यता अहिले पनि छ ।
१७ औं शताब्दीसम्म पनि बिहानको खाजामा समेत बियर वा वाइन पिउने युरोपेलीहरूमा ठूलो परिवर्तन आयो । कफीले द्रुत गति लियो । रक्सीमा डुबेको पश्चिम युरोपेली देशहरूका लागि कफी बुटी नै बनेर आयो । झ्याप नभईकन बहस गर्न सकिने । दिमागलाइ ऊर्जा दिने । निद्रा भगाउने । कफीले रक्सीको प्रभावलाई घटाइदिन्छ भन्ने भ्रम पनि थियो तर त्यो सत्य थिएन । वास्तवमा यसले रगतबाट रक्सी हराउने दर झन् घटाइदिन्छ भनेर विज्ञानले भन्छ ।
रक्सी पिउन वर्जित अरबका मुसलमानलाई त कफी नलाग्ने वाइन बनेर आयो । आज कफीमा चर्चित मोका वास्तवमा यमनको मोका सहरबाट आएको हो । १६ औं शताब्दीको सुरुमै यो अरबमा सामाजिक पेय भएको थियो । विवाद बढ्दै गएपछि मुसलमान समुदायमा केही समय प्रतिबन्ध लगाइयो तर त्यसलाई जनताले उल्लंघन गरे । अरबका मुसलमान समुदायमा निकै ठूलो बहस सुरु भयो । कफी मादकपदार्थ हो वा होइन भन्नेमा विवाद चल्यो । तर, कफीले आफ्नो लय भने छाडेन । यो झन्–झन् लोकप्रिय हुँदै गयो । अरब १७ औं शताब्दीको अन्तिमसम्म कफीको सबैभन्दा ठूलो उत्पादक र निर्यातकर्ता थियो । तर, कफीमा अरबको एकाधिकार त्यसपछि तोडियो जब डचहरूले अहिलेको इन्डोनेसियाको जाभामा कफी खेती सुरु गरे र सीधै नेदरल्यान्ड्स पुर्‍याउन थाले । अहिले विश्वव्यापी भएको छ ।
जताजता खोला–नदी, उतैउतै टर्वाइन् । मर्स्याङ्दीको शाखा नदी न्यादी शिरतिर पुग्दासम्म पनि टनेल बनिरहेका भेटिन्छन् । धूलो नभए पनि मानिसहरू मास्क लगाएर बसेका । केही चिनियाँ कामदार भर्खर बिदा मनाएर फर्केकाले कोरोना भाइरसको त्रास रहेछ । अजंगका पहाड हेर्दै गर्दा मनमनै भने, ‘अरे यार एक भाइरस् विश्व हल्लाइरहेछ तर मनुवाहरूको घमण्ड कत्रो छ ! १२ हजार वर्षपछि बल्ल हात कसरी धुने भनेर सिकिरहेको मनुवा पृथ्वीमाथि धावा बोल्छ र फुर्तीसाथ भन्छ— पृथ्वीमाथि विजय प्राप्त गर्नु छ !
मर्स्याङ्दीको पुरानो बलौटे माटोमा फैलिएको बेंसीसहरमा दुई हजार घरधुरी नाघिसके । केही मानिस एउटा होटलमा मस्त पिइरहेछन् । दिउँसै भोड्कादेखि ह्विस्कीसम्म । बियरपछि वाइन, त्यसपछि १२ शताब्दीतिर औषधि बनाउने प्रयासमा कडा रक्सी अर्थात् हार्ड ड्रिंक्स बनेको थियो । अहिलेको खोयाबिर्के बनाउने तकनिकी अर्थात् डिस्टिलेसन त्यहाँबाट सुरु भयो । युरोपेलीले ह्विस्की बेचर दाम कमाए अनि राज चलाए । अलि सस्तो रमचाहिँ अमेरिकाले बनायो र तहल्का मच्चायो । रमलाई त अमेरिका बनाउने पेय पदार्थ नै भनिन्छ ।
नदी किनारमा लगेर फोहोर थुपारेका छन् बेंसीसहरेले । त्यसैको छेउमा एक हूल बंगुरपालन । ती रेस्टुराँमा पुग्दा पोर्क बन्छन् । किनारमा फोहोरचुली अनि शिरमा हिलामचुली । मर्स्याङ्दीको कथा एउटै फोटामा कैद गरेपछि हामी दक्षिण हानिन्छौं । कतै सुकेको त कतै ताल परेको मर्स्याङ्दी । फोटो खिच्न पनि नपाइने रे ! कसैले पूरै नदी टनेलमा हालेर बिजुली निकाल्न पाउने, हामीले फोटो पनि खिच्न नपाइने ? पत्रकार साथी चन्द्रकान्तमार्फत सोर्सफोर्स लगाएर मध्य–मर्स्याङ्दी ड्यामको फोटो खिच्यौं । सेनाको लामो सोधपुछ र प्राधिकरणका हाकिमले भन्दिएपछि सो अवसर मिलेको थियो । ‘पहिला बुंगै पौडेको यही नदीमा आज फोटो खिच्न पनि सीडीओको तोक आदेश अनि सेनाको अनुमति चाहिने भो यार !’ चन्द्र जिस्किए । कोरोनाको त्रासले होलीको रङ खुइल्याइदिएकाले मानिसहरू खासै जमेका छैनन् । तर, बाटाबाटामा रक्सी, बियरले आफ्नो ड्युटीचाहिँ राम्रैसँग गरिरहेका छन् । त्यसै जाँडले संसार कहाँ हल्लाएको हो र !
हामी पनि के कम ! मलेखुमा उही मेसोपोटामियाको त नभनौं, युरोपको बियर पिउँदै गर्दा चालक भाइले भने— म त कोक खान्छु ! यो मेरो कथाको अन्तिम गिलास हो । कोकको साम्राज्य अर्थात् चिसो भनेकै कोकाकोला । औद्योगिक क्रान्ति बेलायतबाट सुरु भए पनि यो अमेरिका पुगेपछि वास्तवमा मौलाएको थियो । सन् १९०० तिर बेलायतलाई पछि पार्दै विश्वको सबैभन्दा ठूलो अर्थतन्त्र बनेको अमेरिकाको विश्वव्यापीकरणमा कोकाकोलाको निकै ठूलो हात थियो । जसरी बेलायतको साम्राज्य चियाको कपमा देख्न सकिन्छ, त्यसैगरी अमेरिकी साम्राज्य कोकाकोलाको गिलासमा ।
बेलायती वैज्ञानिक जोसेफ प्रिस्लेले १७७२ मा किताब लेखे– ‘पानीमा गर्भ बसाउँदा’ । पानीभित्र कार्बनडाइअक्साइड मिसाएर सोडा–पानी बनाउने तरिका । १९ औं शताब्दीको सुरुमा यल विश्वविद्यालयका प्राध्यापक बेन्जामिन सिलिम्यानको सहयोगमा पहिलोपटक सोडा–पानीको व्यापार अमेरिकामा सुरु भयो भनेर स्टान्डेज लेख्छन् । सोडा–पानीलाई वास्तवमा प्रजातन्त्रसँग दाँजेर अमेरिकीहरू भन्थे— धनीले स्याम्पेन पिउन सक्छ, गरिबले बियर तर दुवैले चाहिँ सोडा पानी पिउँछन् ।’
१८८४ मा अमेरिकी फर्मासिस्ट जोन पेम्बर्टनले दक्षिण अमेरिकामा पाइने कोका अर्थात् कोकिन बन्ने बिरुवा र पश्चिम अफ्रिकाको कोला नामक बिरुवाबाट निकालिएका पदार्थ मिसाएर कोकाकोलाको फर्मुला बनाएका थिए । पछि एसा क्यान्डलरले पेम्बर्टन मरेपछि १८८८ मा कोकाकोला आफ्नो जिम्मामा लिए, जम्मा २३ सय डलरमा । कोक भुसको आगोजसरी संसारमा फैलियो । मलेखुनजिकै त्रिशूली नदी किनारमा त्यो कोकको बोतल यसरी ठडिएको छ, मानौँ ऊ सगरमाथा टेकेर भर्खर झरेको हो र नदी किनारमा डुब्दो घामतिर फर्केर थकाइ मारिरहेछ । जसै अमेरिकाले पुँजीवादको किल्ला विस्तार गर्दै गयो, कोक त्यसको सहयात्रीको रूपमा अगाडि बढ्यो । अनेक प्रयास गर्दा पनि रुस छिर्न नसकेको कोकाकोलाको अझै चम्किला दिनचाहिँ बर्लिनको पर्खाल ढलेपछि आयो । पूर्वी जर्मनहरू पर्खाल फुटाएर जब पश्चिम पसे, उनीहरूलाई कोकाकोलाले स्वागत गरियो । विश्वका कतिपय देशमा अमेरिकाको विरोध गर्दा कोकका बोतलहरू सडकमा खन्याउने गरिन्छ । कोक अमेरिकी पुँजीवादको एउटा सिम्बोल बनेर उभिएको छ ।
‘थानकोट पुग्नू धूवाँ चाख्नू ! पहिला गु गनाए गाउँ आयो भनी बुझ्नू’ भन्थे, अहिले एक सर्को धूलो पिएपछि सहर पुगियो भन्ने बुझ्नुपर्छ । धूवाँ फोक्सो हल्लाइरहेछ तर भीमले छुट्टिने बेला गाएको गीतले चाहिँ मन–मुटु हल्लाइरहेछ :
हिउँद लाग्यो हिमालको शिरबाट
बर्खा लाग्यो खोलीको तीरबाट
हेर्दा राम्रो हिमालको हिउँजस्तो
यो मुटुको टुक्रा नै दिऊँजस्तो
प्रकाशित : कार्तिक १, २०७७ ०९:०५
मेरो समाज रुकुम घटनामा दोष कसको, कति भनेर केलाउँदै छ, गल्ती कसको भनेर बहस गर्दै छ । विवाद गर्दै गरौँला तर अहिलेका लागि एउटा कुरामा सहमत भइदिऊँ– हामी मान्छे बन्नै बाँकी रहेछ । आशा छ, कुनै दिन त पक्का हामी मान्छे बन्नेछौँ । प्रयास जारी राखौँ ।
जेष्ठ २४, २०७७ रमेश भुसाल
मेरो एउटा साथी छ । चिटिक्क परेको, अलि होचो कदको अनि गोरो । ऊ मृदुभाषी छ, उस्तै मिहिनेती र मिलनसार पनि । स्नातकदेखि स्नातकोत्तरसम्म सँगै पढेको । कहिले शिवपुरीका जंगलमा कार्बन कति छ भनेर नाप्न गयौँ त कहिले देउसी–भैलो खेल्न रातभरि हिँड्याैं। सहयोग मागे ऊ विरलै नाइँ भन्थ्यो । थेसिस गर्न जाऊँ भन्दा ऊ सहर्ष स्वीकार गरेर एक साताभन्दा बढी शिवपुरीकै जंगलमा मसँगै बसेथ्यो । हामी कहिले मातेर हिँड्यौँ त कहिले हाँसेर ।
उसले बनाएका नोट कलेजमै चर्चित थिए । केही समस्या परे वा जानिएन भने कसलाई सोध्ने १ पहिलो नाम उसैको आउँथ्यो । ऊ दिल खोलेर सिकाउँथ्यो । जिन्दगी त उसको मेरोभन्दा सुखी छ भन्ने लाग्थ्यो मलाई । कम्तीमा उसको काठमाडौं खाल्डोमा घर थियो, जुन मेरो सपनामा पनि थिएन । गितार बजाउँथ्यो । गीत गाउँथ्यो । हामीले एउटै खाटमा पल्टिएर पनि रात काट्यौँ । एउटै थालमा बाँडेर पनि खायौँ ।
सब चलेकै थियो । घामले पोलेकै थियो । जूनले शीतल बनाएकै थियो । पानी परेकै थियो । बादल उडेकै थिए । पहाड उभिएकै थिए । नदी बगेकै थिए । चरा चिर्बिराएकै थिए । हावा लागेकै थियो । विज्ञानको भाषामा हामी एउटै प्रजाति थियौँ । हाम्रो उस्तै खालको जिन थियो । उस्तै खालको बनोट । हामी अन्न नै खान्थ्याँै, पानी नै पिउँथ्यौँ । तर, एउटा कुरा फरक थियो, उसको थर ‘प’ बाट सुरु हुन्थ्यो भने मेरो ‘भ’ बाट । यो देशका मानिसहरूले उसको नामपछाडिको थरलाई दलित वा ‘दमाईं’ भनेर बुझ्थे, अझै पनि बुझ्छन् र भोलि पनि बुझ्नेछन् । मेरो थरलाई ‘बाहुन’ भनेर । यो न त उसले राखेको थर थियो न त मैले । पुख्र्यौली पहिचानको रूपमा आएको यो थर वा अक्षरको झुन्डले हामी दुईलाई नितान्त फरक हुन् भन्ने बुझाउँछ, कम्तीमा पनि म अहिले बसिरहेको समाजमा । हाँस्दा, खेल्दा, पढ्दा, नाँच्दा, गाउँदा यसले खासै फरक पारेको थिएन । लागेको थियो सब ठीकठाक चलिरहेकै छ ।
मैले सहपाठी युवती मन पराएँ, जसलाई मेरो समाजले मभन्दा अलिमुनिको जात भनेर बुझ्छ– क्षत्री । मलाई त्यसको न त कुनै पर्वाह थियो न त उसलाई । तर, उसको र मेरोबीचमा अर्को फरक थियो । म विकट पहाडबाट आएको केटो, जसको काठमाडौंमा केही छैन । ऊ काठमाडौंमा जन्मेकी हुने–खाने नै तर परिस्थितिले अत्यन्त सकसपूर्ण बनाएको जिन्दगीमा सधैँ लडेर हुर्केकी । तर, हाम्रो कुरा मिल्यो वा प्रेम भयो । मेरो त्यो साथीले पनि त्यस्तै समूहको अर्की केटी मन परायो, जो हाम्री सहपाठी थिइन्, जसलाई यो समाजले क्षत्री भनेर बुझ्छ । उनीहरू पनि प्रेममा परे ।
विश्वविद्यालयबाट राम्रो अंकसहित पास भएका हामी सबै जागिर खान थाल्यौँ । वातावरण विज्ञानको स्नातकोत्तर सानो पढाइ होइन, कम्तीमा यो देशमा जहाँ त्यति पढ्ने अवसर कमैले पाउँछन् । मेरो साथी अनुसन्धानमा लाग्यो, म सञ्चारमा । हाम्रा प्रेमिकाहरूले पनि जागिर खान थाले । अब प्रेमलाई विवाहमा बदल्नुपर्ने दिन आयो । मसँग केही थिएन । न त पुख्र्यौली सम्पत्ति, न त भरपर्दो जागिर, बिहे गरेर जीवन कसरी धान्ने ? हामीले धेरैपटक आफैँले आफैँलाई प्रश्न गर्‍यौँ । तर, हामीसँग आँट थियो, एकअर्काको भरोसा थियो अनि केही थान सपना । यी सबैलाई बटुलेर हामीले बिहे गर्‍यौं ।
मलाई पक्का छ, यदि मैले ‘क्षत्रिनी’ नभएर ‘दमिनी’ वा ‘कमिनी’ बिहे गरेको भए मेरा अधिकांश आफन्त मेरो घरमा पनि छिर्दैनथे, बिहेमा आउने त परको कुरा । म यसमा पनि पक्का छु– यदि म ‘दमाई’ वा ‘कामी’ भएको भए मेरी प्रेमिकाका परिवारले उसलाई मसँग बिहे गर्ने स्वीकृति मरेकाटे दिँदैनथे । उनीहरूका नजरमा आफू माथिल्लो जातका र ‘दमाई’ वा ‘कामी’ चाहिँ तल्लो जातका !
हाम्रा छोराहरू–छोरीहरू हुर्कंदै छन् । तिनीहरूले पनि सायद हामीले जस्तै प्रेम गर्नेछन् । तर, के तिनीहरूले पनि भागेर सात समुद्रपारि आफ्नो घरबार बसाउनुपर्नेछ ? के तिनीहरूले पनि कुटिनु–पिटिनुपर्नेछ ? के तिनीहरूले पनि मारिनुपर्नेछ वा नदीमा हेलिनुपर्नेछ ? मलाई थाहा छैन तर संकेत निको छैन ।
अरू साथीहरूले पनि भटाभट बिहे गर्न थाले । तर, मेरो त्यो साथीलेचाहिँ बिहे गरेको थिएन । बिहे गर्ने होइन भनेर सोध्दा ऊ भन्थ्यो, ‘कसरी गर्ने, उसको परिवारले मान्दैन ।’ म भन्थेँ, ‘मन्दिरमा जाने विवाह गर्ने हामी साक्षी बस्छौँ ।’ यसो भन्दा ऊ हाँस्थ्यो मात्र ।
संघर्ष मेरो पनि सानो थिएन । दु:खको त हामीसँग सागर नै थियो । ‘विधवा’ को छोरो हुँदाका आफ्नै पीडा छन् । गरिब हुनुपर्दाको पीडा उस्तै छ । तर, मलाई कसैले पनि ‘तँलाई छुन हुन्न’ भनेको थिएन, जुन उसलाई भनिन्थ्यो । हो हामी भन्दैनथ्यौँ तर उसले मन पराएकी केटीको समाजले भन्थ्यो । मेरो समाजले भन्थ्यो । अझै पनि भन्छ । सके कुट्छ । अझै रिस उठे मार्छ ।
सब चलेकै थियो । घामले पोलेकै थियो । जूनले शीतल बनाएकै थियो । पानी परेकै थियो । बादल उडेकै थिए । पहाड उभिएकै थिए । नदी बगेकै थिए । चरा चिर्बिराएकै थिए । हावा लागेकै थियो । हेर्दा सब ठीकठाक थियो ।
‘प्रयास जारी छ’, ऊ भन्थ्यो । ऊ हाँसेकै थियो । भृकुटीमण्डपमा दिनहुँ चिया–भेला हुँदा रमाएकै देखिन्थ्यो । सबै जागिरे भएपछि चिया–भेला अलि कम भयो । बिहेवारी भएपछि त त्यस्ता भेट विरलै हुन थाले । १२–१५ बाट ४–५ जनामा झरेको त्यो चिया–भेला अहिले अस्तित्वमा छैन । बिस्तारै सबै छरिए । कोही देशभित्रै त कोही बाहिर । कतिले प्रेम गरे तर एकतर्फी भएर बिहे गर्न सकेनन् । केहीको प्रेम बीचमै टुट्यो । कसैले प्रेम नै गर्न सकेनन् वा जानेनन् वा गर्न चाहेनन् । जसले सकेनन् तिनलाई बा–आमाले वा आफन्तले श्रीमती खोजिदिए । भकाभक बिहे भइरहँदा उसले भने ‘प्रयास’ मात्रै गरिरहेको थियो । ऊ न खुलेर भन्थ्यो न त त्यसबारे धेरै कुरा नै गथ्र्यो । तर, हामीलाई थाहा थियो, ऊ प्रेममा छ । उनीहरू संघर्षरत छन् ।
अनेकन प्रयास गर्‍यो तर मेरो साथीले केटीको परिवारलाई मनाउन सकेन सायद । एउटै कारण थियो– उसको थर, जसलाई यो हिमालय पर्वतको नेपाल देशका नागरिकले ‘अछुत’ भनेर बुझ्छन् । परियारको सट्टा उसको थर पोखरेल भएको भए यो देशमा मानिसहरूले बाहुन भनेर बुझ्थे, शाही भएको भए ठकुरी वा राना भएको भए मगर ।
प्रयास जारी रहँदै गर्दा उसले युरोपमा स्कलरसिप पायो । ऊ युरोप गयो तर प्रेमलाई यतै छाडेर । फर्केर आयो । विश्वविद्यालय पढायो । प्रेममा उसको भरोसा थियो । अनेकन प्रयास गरे पनि उसले बिहे गर्न सकिरहेको थिएन ।
दिन कट्दै गए । वर्ष फेरिँदै गए । ऊ फेरि युरोप गयो विद्यावारिधि गर्न, तैपनि अझै बिहे गरेको थिएन । केटीले पनि बिहे गरेकी थिइन । आशा बाँकी नै थियो सायद भन्ने बुझ्न सकिन्थ्यो ।
एक दिन मैले थाहा पाएँ, उसले प्रेमिकालाई पनि उतै बोलाएछ । सायद उनीहरूले निष्कर्ष निकाले– यहाँ बिहे गर्न सकिन्न, त्यसैले सात समुद्र पार गर्नुपर्छ । फेसबुकमा उसले आफ्नो नामको पछाडी थर राखेको छैन । उसलाई यदि केहीले पछि पारेको छ भने केवल ती चार अक्षरको थरले । नभए ऊ केहीमा कम छैन– न त रूपमा, न बुद्धिमा, न त इमानमा, न त प्रेममा । तर, मेरो साथीले यो हिमालको छेल पारेर फेरो लाउन सकेन । यो कस्तो समाज हो, जहाँ कसैलाई उसको नामपछाडिका अक्षरले यति धेरै पिरोल्छन् ! म कस्तो समाजको सदस्य हुँ, जहाँ नामपछाडिका केही अक्षरका कारण कसैले यति अपमानित हुनुपर्छ !
साथीहरू सबैको पहिलो सन्तान जन्मिन थाले । फेसबुकमा फोटा हाल्दा बधाई ओइरिन थाले । हाम्री पनि छोरी जन्मिई । पछिल्ला केही वर्षमा साथीहरूको दोस्रो सन्तान जन्मिन सुरु भयो । दोस्रो सन्तान जन्माउनेहरूले पनि फेसबुकमा फोटो हाल्न थाले । मेरो कथित अछुत साथीले बल्लबल्ल तीन वर्षअघि बिहे गरेको सूचना फेसबुकमा अपडेट गर्‍यो । न त बिहेको निम्तो आयो, न त भोज १ केही महिनाअघि छोरी जन्मिएको फोटो हाल्यो । बिरानो ठाउँमा उसले आफ्नो परिवार बसायो ।
दिन कटेकै थिए । घाम लागेकै थियो, जून पनि । हामीले आफ्नो घरबार बसाएका थियौँ । जिन्दगी अगाडि बढेकै थियो । तर, जसै हामी अर्को पुस्ता निर्माणमा लागिरहेका थियौँ, एक्कासि अघिल्लो साता रूकुमबाट डाक आयो । मेरो साथीको जस्तै थर भएका एक जना प्रेमीलाई मारियो । ऊसँगै गएका साथीहरू भेरीमा हेलिए । कोही मरे, कोही बाँच्न सफल भए । म छाँगाबाट खसेजस्तो भएँ । मन पोल्यो । मैले त्यो साथीलाई खुब सम्झिएँ ।
जाजरकोटबाट रूकुममा प्रेम खोज्न हिँडेका नवराज विकलाई गाउँलेहरूले लखेटी–लखेटी मारे, उनका साथीहरूलाई पनि छाडेनन् । उनी आफ्नो प्रेम खोज्न गएका थिए । के मेरो साथीले पहिला नै थाहा पाएको थियो कि यहाँ उसलाई पनि बाँच्न दिनेछैनन् ? त्यसैले ऊ भाग्यो ? ऊ साथीहरूसँगै केटी लिन गएन र सायद मलाई पनि बचायो । यदि हामी पनि मिलेर केटी लिन गएको भए के थाहा, ‘डुमको साथी’ भनेर मलाई पनि मार्ने थिए कि ? उसले सोच्यो– जहाज चढेर, समुद्र काटेर यो दरिद्र समाजले नचिन्ने भूगोलमा जान्छु र मेरो प्रेमलाई उतै बोलाउँछु । उसले आफ्नो प्रेमलाई लिएर गयो । कम्तीमा उसले जहाज चढ्ने हैसियत बनाएको थियो । हातमा डिग्री थियो । तर, नवराजसँग त्यो हैसियत पनि थिएन । उनी रुँदै मरे । मेरो साथी पनि सायद मन मारेर सात समुद्रपारि बसेको छ । म सोध्ने आँट गर्दिनँ ।
आज पनि घाम लागेकै छ । जून पनि । पहाड उस्तै उभिएका छन् । नदी बगिरहेका छन् । हावा पनि चलिरहेकै छ । तर, अहिले कोरोना कहरले हामी सबै अछुत भएका छौँ, मेरो साथी र ऊजस्ता लाखौँ मानिस जिन्दगीभरि अछुत भएर बस्न बाध्य बनाइएका थिए । त्यो कस्तो र कत्रो पीडा हो, सायद भोग्नेलाई थाहा होला । म त अनुमान मात्रै गर्न सक्छु । उसले निकै लामो संघर्ष गर्नुपर्‍यो र कतै टाढा पुगेर घर बसायो । फरक यही हो– आँट र भरोसाले हामीले हाम्रो जिन्दगी यहीँ चलायौं तर उसका लागि त्यतिले पुग्दैनथ्यो । ऊसँग आफ्नै समाज थिएन, जुन हामीसँग थियो । अरूको समाजमा एक्लै बस्न सकिएला तर आफ्नो समाजमा एक्लिएर बस्नुजस्तो सकस अर्को केही हुँदैन । त्यसैले उसले अर्काको समाजमा सात समुद्रपारि गएर आफ्नो घर बसायो, जहाँका मानिसहरूले उसलाई एसियाली भनेर बुझ्लान्, गरिब देशको नागरिक भनेर बुझ्लान् तर अछुत भनेर बुझ्दैनन् । त्यो उसका लागि ठूलो सुख हो ।
यो एकादेशको कथा होइन । यो चौरजहारीको कथा होइन । यो भेरी नदी किनारको कथा पनि होइन । यो त वाग्मती किनारको कथा हो । पढे–लेखेका अनि संसार घुम्न सक्ने हामीजस्ता पुस्ताको कथा हो । यो आदिमकालको कथा होइन । यो त हामीजस्तै मानिसले रकेटमा उडेर चन्द्रमा टेकेको पचास वर्षपछिको कथा हो । जहाज उडेको सय वर्षपछिको कथा । यो त हात–हातमा मोबाइल र इन्टरनेट भएको युगको कथा हो ।
हामी कस्तो समाज निर्माण गर्दै छौँ ? म र मेरो साथीका छोरी वा छोराहरूले कस्तो समाजमा बाँच्नुपर्ला ? यस्ता प्रश्नले मन आन्दोलित गर्छन् । तर, तितो यथार्थ के हो भने अबको २० वर्षपछि पनि मेरो साथी ‘डुम’ नै हुनेछ र म ‘बाहुन’ । किनभने उसले फेसबुकमा लुकाउन बाध्य पारेको थरले उसलाई अर्को पहिचान दिने छैन । दरिद्र सोचले ग्रसित समाजको सदस्य हुनुपरेकोमा बितेका केही दिन परेली भिजाएँ । हाम्रा छोरीहरू हुर्कंदै छन् । अरू साथीका छोराहरू हुर्कंदै छन् । तिनीहरूले पनि सायद हामीले जस्तै प्रेम गर्नेछन् । तर, के तिनीहरूले पनि भागेर सात समुद्रपारि आफ्नो घरबार बसाउनुपर्नेछ ? के तिनीहरूले पनि कुटिनु–पिटिनुपर्नेछ ? के तिनीहरूले पनि मारिनुपर्नेछ वा नदीमा हेलिनुपर्नेछ ? मलाई थाहा छैन तर संकेत निको छैन ।
कर्नाली नदीको शिर तिब्बतबाट भारतको गंगासम्म पुग्दै गर्दा सुर्खेतको घाटगाउँमुन्तिर कञ्चन बगिरहेको भेरी नदीमा मैले मुख धोएको दुई वर्ष पनि कटेको छैन । हामी भेरी नदी बगाउने पहाडहरूलाई हेरेर केही समय बसेका थियौँ । भेरी कर्णालीभन्दा पनि निकै सफा देखिन्थ्यो । छपछप पानी उबाएर मुख धोएको त्यो भेरीमा अहिले नवराजहरूको रगत मिसिएको छ । मुख धुँदा लागेको थियो– सब ठीकठाक छ । घामले पोलेकै छ । बादल उडेकै छ । पहाड उभिएकै छन् । नदी बगेकै छन् । चरा चिर्बिराएकै छन् । हावा लागेकै छ । तर, होइन रहेछ । सब ठीकठाक छैन रहेछ । यो सोचको दरिद्रताविरुद्धको युद्ध अरूसँग होइन, आफैंसँग गर्नुपर्ने रहेछ । यसका विरुद्ध बन्दुकले लडेर पनि हुँदोरहेनछ । कानुनमा लेखेर पनि हुँदोरहेनछ । संविधान नै लेखे पनि पारलाग्दो रहेनछ । भागेर पनि पार लाग्नेवाला छैन । यो सोचविरुद्ध आफ्नै दिमागलाई खलबल्याउनुबाहेक अर्को ओखती छैन ।
तर, दिक्कलाग्दो कुरा के छ भने अझै पनि मेरो समाज रूकुम घटनामा दोष कसको, कति भनेर केलाउँदै छ, गल्ती कसको भनेर बहस गर्दै छ । विवाद गर्दै गरौँला तर अहिलेका लागि एउटा कुरामा सहमत भइदिऊँ– हामी मान्छे बन्नै बाँकी रहेछ । आशा छ, कुनै दिन त पक्का हामी मान्छे बन्नेछौँ । प्रयास जारी राखौँ ।
प्रकाशित : जेष्ठ २४, २०७७ १०:२१